Milatariga Soomaaliya oo sheegay iney duleedka Kismaayo ku duleen 16 Al-Shabaab ah. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMilatariga Soomaaliya oo sheegay iney duleedka Kismaayo ku duleen 16 Al-Shabaab ah.
Milatariga Soomaaliya oo sheegay iney duleedka Kismaayo ku duleen 16 Al-Shabaab ah.
November 22, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Milatariga Soomaaliya oo sheegay iney duleedka Kismaayo ku duleen 16 Al-Shabaab ah.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose ayaa soo sheegaya in Ciidamada Soomaaliya iyo Al-shabaab ay ku dagaalameen duleedka magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose.
Dagaalkaan ayaa ka dhacay deegaanka Baar-sanguuni waxayna saraakiisha Soomaaliya ay sheegeyn iney dagaalkaasi ku duleen 16 dagaalame oo Al-shabaab ah sidoo kalane ay ku dhaawaceen tiro intaasi ka badan.
Ma jirto ilo ka madaxbanaan Saraakiisha Soomaaliya oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay balse dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in labada dhinac uu khasaare soo kala gaaray.
Al-Shabaab ayaanan weli ka hadlin dagaalkaan ka dhacay duleedka Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose.
Sarkaal ka goostay Soomaaliland oo dagaal kula wareegay Ceel-Afweyne ee gobalka Sanaag.
Itoobiya:Haweeney Loo Doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada
657,303 total views, 2,388 views today
657,303 total views, 2,388 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
657,175 total views, 2,386 views today
657,175 total views, 2,386 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
657,206 total views, 2,387 views today
657,206 total views, 2,387 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
657,268 total views, 2,388 views today
657,268 total views, 2,388 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
657,327 total views, 2,386 views today
657,327 total views, 2,386 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]